विदेशबाट फिर्ता आउनेलाई खुशीको खबर ! चार्टर फ्लाइटको भाडा फेरि घ’ट्यो, कहाँको कति? [ सूची सहित ]- जानकारीको लागी सक्दो शेयर गरौँ ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/विदेशबाट फिर्ता आउनेलाई खुशीको खबर ! चार्टर फ्लाइटको भाडा फेरि घ’ट्यो, कहाँको कति? [ सूची सहित ]- जानकारीको लागी सक्दो शेयर गरौँ !
साउदीको दमामको भाडा ५३० बाट ४३०, ५६५ बाट ४६५ र जेद्दाको ६९० बाट ५९० डलरमा झारिएको छ । ओमानको भाडा ४६० बाट ३६८ मा झारिएको छ । बहराइनबाट फर्किने यात्रुले ३९२ डलरमा नेपाल एयरलाइन्सको टिकट पाउने छन् । यसअघि बहराइनबाट फर्किने भाडादर ४९० डलर थियो ।